हामीले MIUI .8.2.२ को परीक्षण गर्‍यौं, Xiaomi ले एकदम थोरै समाचार ल्यायो Androidsis
हामीले MIUI .8.2.२ को परीक्षण गर्‍यौं, शाओमीले थोरै समाचार ल्याउँदछ
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | समीक्षा, रोम, Xiaomi
केही दिन पहिले हामी कुरा गर्दै थियौं अपरेटिंग प्रणाली को नयाँ संस्करण को धेरै Xiaomi टर्मिनल को आगमन. धेरैले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक, MIUI9आइपुगेन। यसको सट्टामा, के प्राप्त भयो त्यो पहिले नै अवस्थित MIUI 8 को अर्को संस्करणको तुलनामा केही थिएन जुन यसको संस्करण ..२ मा छ।
एक हप्ता प्रयोग पछि यस नयाँ संस्करणको नवीनताहरू तिनीहरूको अनुपस्थितिबाट स्पष्ट छन्। जबकि यो सत्य हो कि अन्तिम ब्याचहरूको सियाओमीले एमआईयूआई 8. को साथ ठूलो काम गर्‍यो। थोरै वा कुनै परिवर्तनले यस धेरै नगण्य नविकरणको लागि अलिक उदासीनताको कारण दिन्छ।
1 MIUI 8.2 उस्तै हो
2 के MIUI9ले कुनै महत्त्वपूर्ण समाचार ल्याउनेछ?
MIUI 8.2 उस्तै हो
MIUI हालसालै धेरै राम्रोसँग काम गर्ने आधारमा, Xiaomi प्रयोगकर्ताहरूले केही समाचारहरू छुटाउँदछन्। त्यो हो, समाचार जुन अपरेटिंग सिस्टम अगाडि बढिरहेको छ र यसले नयाँ प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ भनेर संकेत गर्दछ। यो सत्य हो कि अघिल्लो संस्करणहरूको त्रुटिहरू सुधार गरियो जब नयाँ जारी हुन्छ। तर के यो पर्याप्त छ?
परिवर्तनको रूपमा, जुन हामी उपन्यासहरू भन्न सक्दैनौं किनकि तिनीहरूले कुनै विकासको योगदान गर्दैनन्, हामी केही कुरा औंल्याउँछौं। उदाहरण को रुपमा, यस नयाँ संस्करण स्थापना भएको Xiaomi फिंगरप्रिन्ट प्रयोग गरेर उपकरण अनलक गर्दा कम्पन छैन। जब हामी फिंगरप्रिन्ट रिडरमा हाम्रो औंला राख्दछौं अघि फोन अनलक गर्नु अघि एक सानो कम्पन उत्सर्जित भयो। हो यो पढाइ गलत छ जब यो कम्पन रहन्छ.
त्यहाँ केहि प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले फिंगरप्रिन्ट रिडरको बारेमा गुनासो रिपोर्ट गरेका छन्। अद्यावधिक पछाडि केहि पढ्ने त्रुटि जुन अघिल्लो मेटाएर फेरि फिंगरप्रिन्ट दर्ता गरेर समाधान गरिएको छ। हामीले हाइलाइट गर्न केहि पनि देखेनौं, यो कम्पन हुनु अघि र अहिले यो हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ परिवर्तनहरू मन पराउनेहरू र यसलाई एक सुधारका रूपमा लिनेहरू छन्, मलाई लाग्दैन कि यो त्यो योग्यताको योग्य छ।
MIUI .8.2.२ को सियोमीमा परिवर्तन भएको अर्को कुरा भनेको फोन लक भएको सूचनाहरू हुन्। यदि तपाईंसँग पप-अप सूचनाहरू सक्रिय छन् भने तपाईंले कुनै परिवर्तन देख्नुहुने छैन। जबबाट तपाईं एउटा सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ फोन सक्रिय हुन्छ र सम्बन्धित सन्देश देखाउँदछ। तर यदि तपाईंसँग यी सूचनाहरू असक्षम गरिएको छ भने, फोन आफैंबाट सक्रिय हुन्छ, तर स्क्रिनमा केही नदेखाई।
मुख्य कुरा यो हो यदि फोनले सूचनाको साथ कम्पन गर्दछ भने यो स्वचालित रूपमा लक स्क्रिन देखाउँदै जान्छ। अघिल्लो संस्करण अधिसूचना LEDs मा हेर्दै, हामी यो कस्तो प्रकारको सन्देश जान्न सक्छौं। र यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै सन्देशहरू प्राप्त गर्ने अवस्थामा ब्याट्री खपतलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।
के MIUI9ले कुनै महत्त्वपूर्ण समाचार ल्याउनेछ?
संक्षेप मा, हामी देख्छौं, साह्रै नराम्रो उपन्यासहरू जुन यसैको रूपमा बोलावट पाउन योग्य छ। MIUI .8.2.२ को साथ प्रयोगको एक हप्ता पछि हामी अधिक भन्न सक्दैनौं। सत्य यो हो शियोमीले पहिले जस्तो काम गर्न जारी राख्यो, र हुनसक्छ त्यो मुख्य समस्या हो। उनीहरूको कामको साथसाथै, प्रयोगकर्ताहरू महत्त्वपूर्ण समाचारहरू र सुविधाहरू चाहन्छन् जसले हामीलाई केही फरक प्रयोग गरिरहेको छ जस्तो महसुस गराउँछ।
यस्तो देखिन्छ कि हामी अब राम्रोसँग काम गर्ने फोनसँग सन्तुष्ट छैनौं। हामी जहिले पनि अधिक चाहान्छौं। कन्फिगरेसन र अनुकूलनको अधिक स्तर। अधिक समायोजन, अधिक तरलता, उच्च गति। सियोमी प्रयोगकर्ताहरू, उनीहरूको उपकरणहरू राम्रो प्रदर्शन गर्नको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्, अधिक चाहान्छन्। यो स्पष्ट छ कि जसले शुरूदेखि नै राम्रो काम गर्छ उसले सुधारको लागि कम ठाउँ पाउँदछ, त्यसैले Xiaomi मा यो सजिलो छैन।
नयाँ सुविधाहरू जस्तै सुधारिएका डिजाइनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई केही गर्दैनन् जसले थप अनुकूलन थिमहरू प्रयोग गर्छन्। नयाँ अधिसूचना टोनहरू थप्नु परिवर्तनको रूपमा ध्यान दिइएन। साथै फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ अनलकको कम्पन हटाउने र सूचनाहरूको साथ पर्दा खोल्दा, केहि नयाँ छैन, हुन सक्छ भिन्न।
यदि तपाईंले अहिले सम्म MIUI 8.2 स्थापना गर्नुभएको छैन हामी तपाइँलाई होइन भनेर भन्न जाँदैछौं। तर यदि हामी तपाईंलाई त्यो बताउँछौं तपाईले अर्को संसारबाट पनि हराउनु भएको छैन। आउनुहोस्, तपाईले धेरै फरक देख्नुहुने छैन। यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले उच्च ब्याट्री खपतको आलोचना गर्छन्। यस समयमा हामीसँग MIUI by, जुन चाँडै आउँदैछ जस्तो गरी आउँदैछ भनेर लामो-प्रतीक्षित समाचारको लागि पर्खनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » रोम » हामीले MIUI .8.2.२ को परीक्षण गर्‍यौं, शाओमीले थोरै समाचार ल्याउँदछ
ग्यालक्सी एस + + सँग ग्यालेक्सी नोट as जस्तै ब्याट्री डिजाइन छ
एन्ड्रोइड को लागी इन्स्टाग्राम एक अफलाइन मोड शुरू